ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်သောအမှုန် Aerosols | အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
အ aerosol မှုန်ရေမွှား သူတို့ကလေထုထဲတွင်ပစ္စုပ္ပန်သေးငယ်တဲ့အမှုန်ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည်တိမ်များဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်တာ ၀ န်ရှိပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ပူနွေးလာတယ် ရာသီဥတု.
အ aerosol မှုန်ရေမွှား သူတို့ကလေထုထဲတွင်သဘာဝကျကျပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည်သစ်တောမီးလောင်မှုများသို့မဟုတ်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုများမှသော်လည်းကောင်း၊ လောင်ကျွမ်းခြင်းမှသော်လည်းကောင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်သည် လောင်စာဆီ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း။ ၄ င်းတို့သည်လူ့ဇာတိဖြစ်စေ၊ သဘာ ၀ မူလဇာတိဖြစ်စေဤအမှုန်အမှုန်များသည်အခြားသူများအကြားရှိအိုဇုန်းလွှာတွင်းရှိအရာများ၏သက်ရောက်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
၎င်းတို့သည်တိမ်များဖွဲ့စည်းခြင်း၊ သူတို့၏ဖွဲ့စည်းမှုသို့မဟုတ်သဘောသဘာဝကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်အခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သည်။ Calypso, ၏ဂြိုလ်တု cnesသူတို့၏သက်ရောက်မှုများကိုတိကျစွာနားလည်ရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်သူတို့ကို ၉ နှစ်ကြာလေ့လာခဲ့သည်။ ဤပစ္စည်းကိရိယာသည်မတူညီသောအလွှာများ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုတိကျစွာတိုင်းတာနိုင်သည် လေထု.
Cnes သည်ဥရောပ၌ပြင်သစ်၏အာကာသဆိုင်ရာမူဝါဒကိုကမ်းလှမ်းရန်နှင့်ကြီးကြပ်ရန်လူသိရှင်ကြားတည်ထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ 1961 ခုနှစ်တွင်ဖန်တီးခဲ့သည် cnes လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့မနက်ဖြန်ရဲ့ဂြိုဟ်တုစနစ်များနဲ့လွှတ်တင်ခြင်းများကိုတီထွင်ပါ။ Cnes အတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည် escena အာကာသ nအမျိုးသားရေးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ဗဟိုအချက်အချာဖြစ်ခြင်းသည်ဥရောပနှင့်နိုင်ငံတကာတို့ဖြစ်သည် အထူးပြု စက်မှုပညာ။ အများပြည်သူဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ သိပ္ပံနှင့်စက်မှုဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်အမြဲတမ်းဆက်ဆံရေးရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုလုပ်သည် အစီအစဉ်များ အာကာသ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပတ်ဝန်းကျင် » CO2 ကူးယူ » Aerosols၊ ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ကိုမျက်နှာသာပေးသောအမှုန်များ
Sundarbans မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရွှံ့နွံတွင်ကျား ၁၀၀ သာကျန်သည်